Iza no Anaran’Andriamanitra? Tokony Hampiasaina ve Izy Io?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goujrati Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Wolaita Xhosa Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Fantaro ny Anaran’Andriamanitra ary Ampiasao
Misy namanao be ve nefa tsy fantatrao ny anarany? Azo antoka fa tsia! Marina àry ny tenin’i Irina, vehivavy any Boligaria, hoe: “Tsy ho lasa naman’Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy mahay ny anarany.” Faly isika fa asain’Andriamanitra manatona azy, araka ny hitantsika teo aloha. Nampahafantariny antsika ao amin’ny Baiboly àry ny anarany. Hoy izy: “Izaho no Jehovah! Izany no anarako.”—Isaia 42:8.
Nampahafantarin’Andriamanitra antsika ao amin’ny Baiboly ny anarany. Hoy izy: “Izaho no Jehovah! Izany no anarako.”—Isaia 42:8
Tena tian’i Jehovah hahalala sy hampiasa ny anarany tokoa ve ianao? Diniho fotsiny izao: Miverimberina efa ho im-7 000 ao amin’ny Soratra Masina amin’ny teny hebreo tany am-boalohany ny anaran’Andriamanitra. Renisoratra efatra izy io amin’ny teny hebreo. Ny anarany irery no miverimberina be hoatr’izany ao amin’ny Baiboly. Tena tian’i Jehovah hahalala sy hampiasa ny anarany àry isika. *
Tsy ho lasa mpinamana ny olona roa raha tsy mifankahafantatra anarana aloha. Fantatrao ve ny anaran’Andriamanitra?
Mety hisy hieritreritra anefa hoe tsy manaja an’Andriamanitra izy raha manonona ny anarany, satria masina Andriamanitra sady tsy misy mahery noho izy. Marina fa tsy mety ny manala baraka ny anaran’Andriamanitra. Ianao ve izao dia hanala baraka ny anaran’ny namanao? Tian’i Jehovah hanome voninahitra ny anarany sy hampahafantatra izany amin’ny olona anefa izay tia azy. (Salamo 69:30, 31; 96:2, 8) Tadidio fa nampianatra ny mpianany hivavaka i Jesosy hoe: “Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao!” Manamasina ny anaran’Andriamanitra isika raha mampahafantatra azy io amin’ny hafa, ary ho lasa akaiky kokoa azy.—Matio 6:9.
Resahin’ny Baiboly fa mandinika tsara an’izay “misaintsaina ny anarany” Andriamanitra. (Malakia 3:16) Izao no hataony amin’ny olona toy izany: “Harovako izy, satria nanjary nahalala ny anarako. Hiantso ahy izy, dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy.” (Salamo 91:14, 15) Tena mila mahalala sy mampiasa ny anaran’i Jehovah àry isika raha te ho namany akaiky.
^ feh. 4 Mampalahelo fa tsy hita ao amin’ny Baiboly maro ny anaran’Andriamanitra, nefa dia miverimberina ao amin’ny Soratra Hebreo, izay antsoin’ny olona hoe Testamenta Taloha. Nosoloana anaram-boninahitra toy ny hoe “Tompo” na “Andriamanitra” ilay anarana. Manazava bebe kokoa an’izany ny pejy 195-197 amin’ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Miresaka amin’Andriamanitra isika rehefa mivavaka, fa ahoana kosa no hihainoantsika azy?
Hizara Hizara Fantaro ny Anaran’Andriamanitra ary Ampiasao